Miantso Ny Praiminisitr’i Timor-Leste Ny Mpamoaka Vaovao Hanaisotra Ny Fitoriana Fanalam-Baraka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Oktobra 2016 8:21 GMT
Vakio amin'ny teny Português, English, Español, English
Raimundos Oki ao amin'ny Lapan'ny Fitsarana distrikan'i Dili, 07 Oktobra 2016. Navoaka sy nomen'i Raimundos Oki alalana.
Nanangana fanangonan-tsonia an-tserasera ny International Federation of Journalists (IFJ na Federasiona Iraisampirenen'ny Mpamoaka Vaovao) miantso ny Praiminisitra Rui Maria de Araujo hanaisotra ny fitoriana. Raha meloka moa dia mety higadra hatramin'ny telo taona an-tranomaizina sy handoa onitra avo dia avo i Raimundos Oki sy i Lourenco Martins.
Tamin'ny fiandohan'ity taona ity, nilaza i Araujo fa tsy hihemotra amin'ny fametrahana fitoriana [mg] na dia eo aza ny fanohanana iraisampirenena azon'i Oki sy i Martins, izay efa kasaina hanomboka amin'ny 7 Oktobra 2016 ny fotoam-pitsarana. Noho ny pitsopitsony ara-teknika anefa dia nahemotra ho atomboka amin'ny 2 desambra ho avy izao izany fotoam-pitsarana izany.
Hiatrika “fiampangana fanendrikendrehana” noho ny tantara izay nivoaka efa ho herintaona lasa izay, tamin'ny 10 novambra 2015, i Oki sy i Martins, tao amin'izany fitantarana izany no namoahan-dry zareo ny kolikolim-panjakana amin'ny fanomezana fifanarahana. Voalaza fa tafiditra tamin'ny iray amin'ireo fifanarahana voalaza ireo ny Praiminisitra Araujo, izay efa nanao ny asa maha-mpanolo-tsaina ambony tao amin'ny Minisiteran'ny Fitantanam-Bola—didy hitsivolan'ny governemanta momba ny servisin-torohay-teknolojia.
Herinandro taorian'ny namoahana ny lahatsoratra, nanao valan-dresaka ho an'ny mpamoaka vaovao i Araujo ary nanambara ny fikasany “hanolotra any amin'ny Biraon'ny Fampanoavana ny fisian'ny fampielezana fiampangana diso” atao azy. Roa andro taty aoriana, tamin'ny 18 Novambra, nametraka amin'ny fomba ofisialy ny fitoriana ny Praiminisitra.
Maro ireo fikambanan'ny media iraisampirenena, ahitana ny IFJ, Freedom House, ny Committee to Protect Journalists [Komity Fiarovana ny Mpanao Gazety], ary ny Sendikan'ny Mpamoaka Vaovao [Azia] Atsimo Atsinanana no niantso an'i Araujo hihemotra amin'izany.
Namoaka taratasy misokatra ho valin'ny fitakian'ireo vondrona ireo i Araujo tamin'ny Avrily ary nampanantena fa tsy hiala vehana ary hiroso amin'ny raharaha.
Tamin'ny Joçlay lasa teo, mbola niezaka ny hahazo an'i Araujo indray ny IFJ-Azia Pasifika, ny CPJ, ary ny Freedom House, nandresy lahatra fa “famelezana ny fahafahan-gazety sy ny zo hahazo vaovao ao Timor-Leste” izao fiampangana izao tamin'ny fitenenana hoe “tsy azo leferina ny fitsarana ny mpamoaka vaovao amin'ny heloka bevava….ara-potokevitra.”
Niezaka nandray anjara tamin'ny raharaha ihany koa ireo mpamoaka vaovao tsirairay tao amin'ny faritra Azia-Pasifika. Naneho ny heviny tamin'ny fanangonan-tsonia i Jose Antonio Belo, talen'ny Tempo Semanal:
I'm signing this Petition because the East Timor Prime Minister is still living with the spirit of the former Indonesian General Dictatorship.
Nandray anjara tamin'ity fanangonan-tsonia ity aho satria mbola miaina araka ny fomban'ny didy jadon'ny Jeneraly Indoneziana ihany ny Praiminisitr'i Timor Atsinanana
Nanoratra ihany koa i Ted McDonnel, Aostraliana mpamoaka vaovao:
I believe in Freedom of the Press & Freedom of Expression. This case brought by the PM of Timor Leste is all about silencing the media.
Matoky ny Fahalalahan-Gazety sy ny Fahalalahana maneho hevitra aho. Resaka fampanginana ny media izao raharaha entin'ny PM Timor Leste izao.
Natao ho an'ny Praiminisitra Araujo, miaraka amin'ny Minisitry ny Fitsarana sy ny Lehiben'ny Fampanoavana izao fanangonan-tsonia notarihan'ny IFJ izao. Ampirisihana ny mpanohana hizara ny fanangonan-tsonia amin'ny alalan'ny fampiasana ny tenirohy #FreeTimorJournalists [AfahoNyMpamoakaVaovaoTimor].